Yedu Yekushambadzira Podcast Inowanikwa pane Stitcher! | Martech Zone
Marty Thompson akandizivisa ku Stitcher, chishandiso chakanakisa chinobatanidza mapodcast uye chinoita kuti zvive nyore kuwana pane yako nharembozha. Kunyangwe iwe uri pa iPhone, Android, Blackberry, kana Palm - unogona kurodha Stitcher uye ikozvino teerera yedu Kushambadzira Podcast ne Kumucheto kweWebhu Radio.
Vateereri vekuratidzira vanga vachikura zvakatsiga uye tiri kunakidzwa nevaenzi vakakura - kusanganisira Lisa Sabin-Wilson, Eric Tobias, Chris Brogan, Debbie Weil, Jason Falls, Scott Stratten, Nicholas Carr… Nezvimwe zvakawanda. Zviratidziro zvakadzorwa pamusoro pe5,000 nguva uye zviripo pa iTunes. Vhiki yega yega, iwe unogona kupinda kune yekuratidzira chat room umo vateereri vanotaurirana, wedzera kukosha kuchiratidziro uye wobvunza mibvunzo.
Kana iwe uri kutevera iyo Kushambadzira Tech blog paFacebook, iwe unozowana Notices kana iyo show ichatanga. Ndinovimba unokwanisa kubatana nesu vhiki rega rega, wanga uri mukana wakanaka wekudzidza kubva kuvatungamiriri muKushambadzira neTekinoroji. Kana iwe uchifarira kuve pachiratidziro, isu takatemwa kunze kwemwedzi yakati wandei asi tizivisei kuburikidza saiti. Kana iwe uri muIndipolis, iwe unogona kutodonha pasi uye uve pachiratidziro pahofisi yedu.
Kutenda nerutsigiro - uye gadzira yakasununguka account pane Stitcher kuteerera kune yedu yazvino show. Vane makwikwi izvozvi kwaunogona kuhwina Sonos S5 + ZoneBridge ($ 500 kukosha).
Tags: Kushambadzira Podcaststitcherstitcher radio
Unoita maGoogle Benchmarks Nyaya?
WordPress Nhare neWPtouch Pro
Mbudzi 12, 2011 na4: 28 PM
Ndakagadziridza posvo nehurukuro huru yevhidhiyo naJeff kubva @geekazine ku #bwela. Ive neshuwa yekuteerera kwedu redhiyo show - inogara iri hurukuro ine ungwaru nevashamisa vashanyi.